ဟင်းတစ်မည်တည်းစားရန်ပြောခြင်းမှာ အလှူများတွင်စား သကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲ ခြိုးခြံချွေတာပြီး ရင်း?? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၄- ဟင်းတစ် မည်တည်းစားရန်ပြောခြင်းမှာ အလှူများတွင်စားသကဲ့ သို့ မဟုတ်ဘဲ ခြိုးခြံချွေတာပြီး ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ရန် ပြောကြားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း လူမှုကွန်ရက်တွင် ဝေဖန်ပြောဆိုမှုများအား မွန်ပြည် နယ်ဝန်ကြီးချုပ်က ပြန်လည်တုံ့ ပြန်ပြောဆိုလိုက်သည်။
ဇန်နဝါရီ ၃ ရက် နံနက်ပိုင်း ကမွန်ပြည်နယ်၊ သထုံမြို့သုဝဏ္ဏ ခန်းမတွင်ကျင်းပသော ပြည်သူ လူထုနှင့်တွေ့ဆုံပွဲတွင် သထုံမြို့ နယ်ပြည်သူတစ်ဦးကကုန်ဈေးနှုန်း ကျဆင်းရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး မေး မြန်းရာ မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် က ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းစေလိုလျှင် ဟင်းတစ်မည်တည်းဖြင့်
စားရန် နှင့် အလှူလုပ်မှုများကိုလျှော့ချ ရန်ပြောကြားချက်နှင့်ပတ်သက် ပြီး လူမှုကွန်ရက်တွင်ဝေဖန်မှုများ မြင့်တက်လျက်ရှိပြီး ဟင်းတစ်မည် တည်းစားရန်ပြောခြင်းမှာ အလှူ များတွင်စားသကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲ ခြိုးခြံချွေတာပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြု လုပ်ရန် ပြောကြားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကို ဒီမိုကရေစီတူဒေး၏ မေးမြန်း မှုကို ပြန်လည်ရှင်းလင်းပြောကြား ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“”ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ဟင်း တစ်မည်တည်းနဲ့စားပြီး ခြိုးခြံချွေ တာပြီး ပိုတဲ့ငွေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်မယ်ဆိုရင် ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ ကျဆင်းသွားမှာဖြစ်သလို ပိုပြီး သင့်လျော်မယ်လို့ ပြောတာပါ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောသွား တာတွေလည်းရှိတာပဲ။ စစ်ပွဲတွေ ပြီးချိန်မှာ အင်္ဂလန်နဲ့ရုရှားမှာ လူ တစ်ဦးဟင်းတစ်မည်သာစားပြီး ခြိုးခြံချွေတာခဲ့ကြတယ်။
ကျွန်တော် ဆိုလိုတာက ဟင်းတစ်မည်တည်း စားပြီးခြိုးခြံချွေတာရင်ကုန်ဈေး နှုန်းတွေလည်းကျလာမှာ ဖြစ်သလို ပိုငွေနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်မယ်ဆို ရင် ပိုသင့်လျော်မယ်။ ဟင်းတစ် မည်တည်းနဲ့ စားမယ်။ အလွန်ဆုံး အရွက်ကြော်လေးပါမယ်။ ဒါမှ မဟုတ် ဟင်းချို၊ ငပိရည်နဲ့စား မယ်။ ခြိုးခြံချွေတာမယ်ဆိုရင် ကုန်ဈေးနှုန်းကို ထိန်းပြီးဖြစ်သလို နောက်ပိုင်းမှာကျလာမှာပဲ။ ဟင်း တစ်ခွက်အလွန်ဆုံး နှစ်ခွက်ပေါ့ ဗျာ။ အလှူတွေမှာလို အများကြီး စားဖို့ မသင့်လျော်ဘူးလို့ ပြောချင် တာပါ။ မစားနဲ့လို့မပြောဘူး။ တစ်နေရာတည်းမှာ လေးငါးမျိုး စားရင် အကုန်အကျပိုများတဲ့ အတွက်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်””ဟု မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက် တာအေးဇံက ဒီမိုကရေစီတူဒေး သို့ ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်တွင်ပြော ကြားသည်။
မွန်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်က ယင်းကဲ့သို့ ဟင်းတစ်မည်တည်း စားရန်ပြောဆိုပြီးနောက်တွင် လူ မှုကွန်ရက်ပေါ်၌ ယင်း၏စကား အပေါ်တွင် ပြည်သူလူထုမှဝေဖန် အပြောဆိုဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီး ယခင်အစိုး ရလက်ထက်တွင်လည်း ဝန်ကြီး တစ်ဦးက ထမင်းတစ်နှပ်လျှော့စား ရန်ပြောဆိုမှုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ဝေဖန် မှုများပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း သိ ရသည်။
ယခုလအတွင်းပြုလုပ်မည့် 'နှင်းဆီနယ်နိမိတ်'အငြိမ့်ဖျော်ဖြေပွဲကို ရုပ်သံလိုင်းများမှ တိုက်ရိ?
ကလေး-တီးတိန်-ရိဒ်ကားလမ်း လမ်ဇန်ကျေးရွာအနီး၌ ယာဉ်တစ်စီး ချောက်အတွင်း ထိုးကျတိမ်းမှောက်